uhlelo lokushisa lwe-billet | Umakhi womshini wokushisa wokungeniswa | izixazululo zokushisa zokungeniswa
billet ukushisa uhlelo
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi aluminium billet ukushisa isithando somlilo, ukushisa kwe-billet, imishini yokushisa ye-billet, billet Ukushisa isithando, umshini wokushisa we-billet, billet ukushisa uhlelo, ubhedu billet ukushisa, ukushisa kwebheyili kwebheyili, I-Biluc Billet Ukushisa Isibhamu
I-24h Eqhubekayo I-Billet Ukushisa Isithandane ne-Induction yethusi / ithusi, i-aluminium, insimbi yensimbi ngaphambi kokushisa okufudumele, i-extrusion, ukushisa okushisayo nokusika, njll.
Isicelo:I-Billet Heating Furnace ikakhulukazi zisebenzela zonke izinto zokushisa zensimbi ngaphambi kokufakelwa, ukudluliswa, ukushisa okushisayo nokusika, nokugcoba izinto zensimbi nokugcoba, ukugcoba, ukushisa nokunye ukwelashwa kokushisa.
Izici zokunikezwa kwamandla:
1. Isebenzisa ukulawulwa kwesekethe okuthuthukile kwe-elekthronikhi, ngamandla angaphezu kwamandla kagesi, ngokweqile manje, ingcindezi ekhawulelayo, ukukhawulelwa kwamanje, ukungabi bikho kwesigaba, ukungabibikho kwamandla, ingcindezi engaphansi kwamanzi, ukulandelana kwezigaba ukuhlonza okuzenzakalelayo, ukuvikela i-alamu lokushisa kwamanzi okushisa nezinye izici eziningi zokuvikela. Umsebenzi wokulungiswa okuzenzakalelayo kwamandla. Ukusuka ekukhokhisweni okubandayo kuya ekusakazeni phakathi nawo wonke umjikelezo kungakhathalekile ukuthi izimo zesithando zishintsha kanjani, gcina ngokuzenzakalela amandla esithandweni somlilo, ukuze inani eliphakeme lensimbi encibilikisiwe nge-kilowatt ngayinye, isikhathi esifushane kakhulu sokushisa kwamandla, ngaleyo ndlela sikhule inzuzo yabakhiqizi, ukukhuphuka komkhiqizo wabasebenzi.
I-2.I-line yokulawula ehlinzekwe ibhokisi elididiyelwe futhi indawo ephakeme yokucindezela ihlukanisiwe ngokuphelele, gcina igumbi lokulawula lihlanzekile futhi lipholile. Kuhle kakhulu ukuthuthukisa impilo yebhodi lebhodi lesifunda nokuthembeka kwesistimu.
Amadivayisi we-3.High-power converter ayethandwa kusuka kubakhiqizi abaziwa emhlabeni wonke nasekhaya, futhi agijima ku-50% yesikhundla esilinganisiwe, ngakho-ke nge-100% yokuklama kokuklama kokuklama, okwandisa uhlelo lonke lokuthembeka.
I-4.Imishini isebenzisa ithusi elikhulu lokupholisa umoya, uma iqhathaniswa nethusi elipholile lamanzi, amandla amaningi wokushisa, ukusebenza kahle okwandayo, akudingi ukulungiswa.
5.Power qala ukusebenzisa zero voltage shanela isiqalo, akunamthelela, esimweni sokungalayishi, umthwalo osindayo, insimbi ebandayo nezinye izifundazwe kungathembeka kusuka kumandla ashukumisayo, azinzile futhi athembekile, angenazinkinga isikhathi eside futhi ahlinzekele isondlo.
I-1. Ukushisa ngokushesha, ukushisa ukushisa okufanayo, ukulahlekelwa kwe-oxydation encane, ukubunjwa kwesimbi ngokulinganayo.
2. Kungashiswa ngqo ezintweni ezibandayo, okulula ukuzishintsha.
Isivinini sokushisa, ukunciphisa okuncane kwe-oxidation:
Njengoba isimiso semvamisa ephakathi Ukushisa ukufakelwa ukufakwa kwe-electromagnetic, ukushisa okwenziwe yi-workpiece ngokwayo, ngakho-ke le ndlela yokufudumala iyashisa ngokushesha, i-oxydation encane kakhulu kanye nokushisa okuphezulu, ngenqubo enhle yokuphindaphinda.
Izinga eliphakeme lokuzenzekelayo, ngaphandle kokusebenza okuzenzakalelayo kungatholakala:
Ukondla ngokuzenzekelayo nokukhishwa okuzenzakalelayo kwedivayisi yokuthunjwa ekhethiwe, kuhambisana nesofthiwe yokulawula ezinikezwe eyenziwe yinkampani yethu, ngaphandle kokusebenza okuzenzakalelayo kungafinyelelwa.
Ukushisa ngokufanayo, ukulawula izinga lokushisa eliphezulu:
Ukushisa ngokufanayo, i-core core table lokushisa umehluko. Ukushisa kungenziwa ukulawulwa ngokuqondile uhlelo lokulawula lokushisa.
Simple Ukushisa Ukushisa ukuthuthwa kwesithando somlilo:
Ngokusho usayizi ohlukile we-workpiece, ukuhlonywa ngokucaciswa okuhlukile kokufakelwa kwesithando somlilo. Isithando somlilo ngasinye sakhiwe nge-hydropower shintshashintshayo isixhumi, ngakho isithando somlilo silula, ngokushesha futhi esilungele ukuthatha indawo.
Ukuvikelwa kwezixhobo ngokuphelele:
Iqoqo eligcwele lemishini yokushisa kwamanzi, ukucindezela kwamanzi, ngaphezu kwamanje, phezu kwamandla, ukungabi nokuvikelwa kwesigaba, kanye nokushisa okungaphezulu, idivayisi ephansi ye-alarm alarm. Ngakho ukuvikelwa okunokwethenjelwa lapho umshini wephutha, ngaphandle kokulimala kwezingxenye.
Ukusetshenziswa okuphansi kwamandla, akukho ukungcola:
Ukushisa okuphezulu, uma kuqhathaniswa nezinye izindlela zokushisa, kunciphisa ukusetshenziswa kwamandla ngempumelelo. Izinsiza kusebenza ngokuhambisana nezidingo zemvelo, akukho ukungcola. Embonini yokwakha, ukusetshenziswa kwamandla lapho kufutheliswa ku-1250 ºC kungaphansi kuka-390 kwh / t.
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi aluminium billet heater, aluminium billet ukushisa isithando somlilo, ukushisa kwe-billet, imishini yokushisa ye-billet, billet Ukushisa isithando, umshini wokushisa we-billet, billet ukushisa uhlelo, Continous billet Ukushisa isithando, ithusi yebheyili ukushisa isithando somlilo, induction ukushisa billet machine